IINDAWO ZOKUTSHATA EZIGQIBELELEYO ZASEMEXICO - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iindawo ezigqibeleleyo zomtshato eMexico
Iindawo ezigqibeleleyo zomtshato eMexico
Ukuya kwenye yeendawo ezithandwayo zaseMexico kumtshato ophuphayo ophuphayo. Reimar / Shutterstock Ukuhlaziywa kwe-Aug 01, 2021
Ukusuka kuLwandlekazi lwePasifiki ukuya kuLwandle lweCaribbean, kukho iidolophu zaseMexico ezingaselunxwemeni ezinqwenelekayo kubo nakubakhenkethi unyaka wonke. Nokuba ngo-2020, unyaka ochaphazeleka sisibetho se-COVID-19, ngaphezulu kwezigidi ezingama-23 abakhenkethi baya eMexico. Isibheno sicacile — amanzi aluhlaza, intlabathi emhlophe iilwandle , Amanxuwa kaMayan, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibandakanya wonke umntu, iimargarita ezinyanisekileyo kunye nokutya kwaseMexico — kwaye kudlulela ngaphaya kwekhefu eliqhelekileyo. Eli lizwe likwindawo entle yetropiki indawo yomtshato .
Ukutshata eMexico kuqala ngokumisela apho ufuna ukuchitha khona usuku lwakho olukhethekileyo. Izinketho zibandakanya iCancun, iPlaya del Carmen, iPuerto Vallarta, iCabo San Lucas, iTulum kunye nokunye, kwaye apho uya kuphelela khona uyehla kule nto uyikhangelayo. ICancun, umzekelo, iyaziwa ngamanxweme ayo, ngelixa i-Tulum idume ngee-cenotes zayo, ezonwabisa ngokuntywila komhlaba.
Nokuba uqala inkqubo yocwangciso lomtshato kwaye ungathanda ukukhangela indawo zomtshato zaseMexico okanye unciphisa uluhlu lwakho lweendawo ezilungileyo zaseMexico zokuba 'ndiyayenza,' ufike kwindawo elungileyo. Kwesi sikhokelo, sifumene iindawo ezili-13 zeyona ndawo intle eMexico- zonke iindawo ezithandekayo zezakhouthando lokubaleka.
Ukukhethwa kweIberostar Cancun eCancun, eMexico
Iberostar ihotele ebandakanya bonke abantu kunye nendawo yomtshato enikezela iiphakheji zomtshato kwindawo ekuyiwa kuyo kunye neembono ezimangalisayo zoLwandle lweCaribbean. Ihotele yaseCancun inezinto ezintle onokuzisebenzisa ngeempelaveki zomtshato wakho: amachibi okudada ali-10, iklabhu yasebusuku, iindawo zokutyela ezintandathu kunye nokufikelela elwandle. Kumtshato wakho, i-Iberostar ineengqokelela ezine ezinesitayile onokukhetha kuzo, ukulungiselela ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezingama-32, kwaye ziyiChic yaseMexico, i-Romantic Blush, iGlam kunye ne-South Asia. Ingqokelela nganye ibandakanya inkonzo eyenzelwe wena evela kwiingcali zomtshato, umphathiswa, iintyatyambo kubantu abaza kuba liqabane, i-gazebo yomtshato, izikimu ezahlukileyo zombala, ibha evulekileyo yeeyure ezintathu nokunye okuninzi.
Jonga le Ndawo
Irizothi yeSandos Caracol Eco e Playa del Carmen, Mexico
I-Playa Del Carmen's Irizothi yeSandos Caracol Eco Yonke indalo, ibandakanyiwe. Indawo yokubhenela ineendlela ezininzi zokuzonwabisa ngexesha leveki yakho yomtshato, ukusuka kwi-safaris yesithombe ukuya kwiindawo zokuhamba imilambo ukuya kwii-kayak kunye ne-cenote yokuhlola. Iindawo ezintathu zomsitho womtshato waseSandos zibandakanya i-cenote eyaziwayo, i-gazebo yaselunxwemeni kunye nethambeka lolwandle eluphahleni. Iiphakheji zemitshato emininzi (uLwandle olonwabisayo, iSummy Romance kunye neDreamcatcher), izibonelelo ezithandekayo zasemva komtshato kwizibini ezitshatileyo ezibambe umtshato wazo, kunye nokhetho kwimitshato eluhlaza nakwimephu, uSandos unento yazo zonke izibini. Ukubeka izinto phezulu, lo ndawo yomtshato ikwabonelela ngesicwangciso somtshato ukujongana neemfuno zakho zosuku olukhulu.
Ngaba uya kuba ngamazwi entombi yam?
Amaphupha ePuerto Aventuras Resort & Spa ePuerto Aventuras, Mexico
Eyakho Amaphupha ePuerto Aventuras umtshato uya kuba nje: iphupha. Apha, uya kutshintshana ngezibhambathiso kumanqanaba emisitho ebabazekayo ukusuka elwandle. Indawo elunxwemeni inikezela iiphakheji ezintathu zomtshato eziphakathi kwexabiso, ukuze ufumane into kuhlahlo-lwabiwo mali. Iphakheji yomtshato wamaphupha eParadesi lelona xabiso lixabiso liphantsi, kodwa izinto ezifakiweyo zibanzi-ngumququzeleli womtshato, igumbi elincomekayo ngobusuku bangaphambi komtshato wakho, iqebengwana lomtshato kunye ne-boutonnières yabantu abaza kuba liqabane, ikhekhe lomtshato, i-toast yewayini , Isaphulelo kunyango lwe-spa, isikhumbuzo sasebusuku simahla seminyaka ezayo nangaphezulu. Iphakheji yamaphupha oThando inee-add-ons ezinje ngejaji okanye umphathiswa, iinwele kunye nokwenza okuthile kwilungu elinye lomtshato, kunye neyure yabucala yokutya kunye nokwamkela isidlo sangokuhlwa. Okokugqibela, iPhakheji yokuGqibela yoMtshato inikezela ngayo yonke loo nto kunye nezinye.
IHyatt Ziva Puerto Vallarta ePuerto Vallarta, eMexico
IHyatt Ziva Puerto Vallarta izisa ubume obuqhekezayo bomtshato wakho waseMexico. KwiNxweme yasePasifiki yaseMexico, indawo yokubhengeza ephezulu iza negama lophawu onokulithemba, kunye nesakhiwo sokucwangciswa komtshato wakho. Ingcali yakho yomtshato iyakukunceda ubethelela phantsi iinkcukacha: Ngaba uyafuna ukusingatha umsitho wakho elunxwemeni, kwigazebo esecaleni konxweme, ithala, kwindlu ephezulu ejonge elwandle okanye kwibhola enkulu? Unokhetho lokwenza nantoni na efanelekileyo kwisitayela sakho kunye nombono. Uyakufaneleka ukwenza ngokwezifiso imenyu yakho yomtshato, ukhethe yonke into ukusuka kwi-hors d'oeuvres ukuya kwisidlo sangokuhlwa okanye i-buffet kwikhekhe lakho lomtshato.
IVidanta Nuevo Vallarta eNuevo Vallarta, Mexico
Umgama omfutshane ukusuka ePuerto Vallarta yiNuevo Vallarta, kwaye apha uya kufumana enye indawo entle kunye nendawo yomtshato: IVidanta Nuevo Vallarta . Indawo entle yaseVidanta ineembono zeentaba zaseSierra Madre, uLwandlekazi lwePasifiki kunye neAmeca River Valley. Indawo inendawo yeendawo ezisixhenxe zomtshato, kwaye bonke baziva ngathi yiparadesi. Okokuqala, iGrand Bliss Beach igqibelele kwimitshato yaselunxwemeni, kunye namandla eendwendwe ezingaphezu kwe-1 000. I-Santuario palapa ihlala ngaphezu kwama-200 kwaye inemithombo emihle kunye neendawo. I-Grand Luxxe Beach yindawo ekhethekileyo yomtshato waselwandle, le ikhupha i-800 kwiminyhadala kunye ne-500 yokwamkela. IGrand Luxxe Pier yindawo entle engaphandle kwedolophu. Umbono weGrand Luxxe ngumyezo oselwandle. Ngaphakathi, iVidanta ibonelela ngeVidanta Ballrooms kwaye, kwiminyhadala emikhulu, iGrand Vidanta Ballroom.
kodwa awukwazi ukuba nothando ngokwenyani
Indawo ekuthiwa yiHave Riviera Cancun Resort & Spa eCancun, Mexico
Indawo yokutyela iHaven Riviera Cancun yindawo yabantu abadala kuphela ekubandakanywa kuyo iCancun resort kwiMexico yaseCaribbean, kuninzi onokukunika umtshato wakho oya kuwo. Ewe uya kuba neembono zolwandle ezinqwenelekayo apha. Kodwa uyakonwabela nenkonzo eyenzelwe wena, umcwangcisi wesiza, indawo yokutshata yabucala kunye namaxabiso eqela kwiindwendwe zakho zomtshato. I-Haven Riviera Cancun ibamba kuphela umtshato omnye ngosuku, ke kugxilwe kuwe nakwiqabane lakho kungekudala. Indawo ekuLuthando yiphakheji yomtshato esondeleyo kule ndawo; Iintsimbi zoMtshato ziyakhala yiphakheji oya kufuna ukuyikhethela umtshato oza kubakho ngokupheleleyo; kunye neTie the Knot lelona phakheji likhethekileyo kwipropathi, elibandakanya isidlo sokwamkela isidlo sangokuhlwa, imvumi eyedwa kunye nokunye.
Enye kunye nePalmilla eLos Cabos, eMexico
ukuba iphepha-mvume lam lomtshato linegama lam elitsha
Izinto ezintle Inye kunye nePalmilla Indawo eLos Cabos yindawo yokuthandana, esecaleni kwi-Baja Peninsula. Ukwamkela iindawo zokuhlala, iminyhadala kunye nemibhiyozo emikhulu, yindawo entle efanelekileyo kuzo zonke iintlobo zemitshato. Iindawo zomnyhadala zibandakanya iBahia Ballroom, inkundla yaseBahia, iTurtle Beach, iPelican Beach, iAgua Pool Deck, iLawn yaseMzantsi, kunye necawa entle emhlophe ehlanjiweyo. Indawo yokubhenela ibonelela ngeendlela ezizodwa zokungena, ezinje ngesango lokungena kweenqwelo. Indawo yokuhlala onokuzifumanela yona kunye neendwendwe zakho zibandakanya izindlu ezisezantsi, igumbi elinamagumbi okulala, igumbi lokulala elinamagumbi okulala kunye neendawo zokuhlala. Emva komtshato wakho, bonwabela iihambo ezikufuphi: Intloko kwindawo yegalufa, iwhale-whale, yiya kuloba ulwandle olunzulu okanye uphumle kwiYach & One.
Ihotele iXcaret eMexico ePlaya del Carmen
Ihotele iXcaret Mexico ivulwe ngoDisemba ka-2017 'njengonikelo lwenkcubeko yamaMaya nakwilizwe lethu, amagcisa alo, isisu salo, ubutyebi balo obuphilayo kunye nelifa lemveli lenkcubeko.' Ihotele iziQinisekiso ezintlanu zeDayimani, ke uyazi ukuba uya kuba namava amahle eholide kunye nawomtshato. I-Xcaret ine-spin yayo kuyo yonke into ebandakanya wonke umntu kunye nomxholo we-All-Fun Inclusive, ukubonelela iindwendwe ngokufikelela okungenamda kunye nokuhamba kwiipaki zayo kunye neeresityu. IXcaret igcwele izithuba zomtshato ezingaphezulu kwe-avareji. Ewe unokhetho lomtshato kunxweme olunentlabathi emhlophe ejonge emanzini aluhlaza. Ukongeza, kukho induli yenduli, itempile yobunye, iLas Cuevas Ballroom, iindawo ezikumahlathi emvula, indawo yeHacienda Henequenera, iindawo zokutyela ezivulekileyo, indawo yokugcina iwayini, kunye neGuadalupe Chapel efumaneka ngaphakathi kwecenote.
El Cid Cozumel eCozumel, eMexico
El Cid Cozumel Amava omtshato ama-Elite yile nto-elite. Njengoko kufanelekile, amava abandakanya konke anikezela kakhulu kwisibini esitshatileyo. Okubandakanyiweyo kwitheko lomtshato sisipha somtshato, i-boutonniere yomyeni, ii-corsage zentombi ezimbini kunye ne-boutonnieres ezimbini zabakhwenyana. Indawo leyo iya kubonelela ngobulungisa boxolo okanye umphathiswa kunye nomcwangcisi womtshato, kunye ne-champagne toast, indawo ephambili yeentyatyambo kwitafile yesithandwa, kunye nebhasikithi yeziqhamo kunye nebhotile ye-champagne kwigumbi labasandul 'ukutshata. Ezinye izinto ezinqwenelekayo kukutya kwekhandlela elunxwemeni wena kunye neqabane lakho kunye nokuthanjiswa kwe-cabana elunxwemeni ezimbini. Ukuba ujonga okungaphantsi, u-El Cid unezinye iipakeji ezifikelelekayo: Amava oMtshato wokuqala, Amava oMtshato waseRomance kunye namava oVuquko.
I-NEST Tulum eTulum, eMexico
Intloko kwi INDLELA Tulum ngamava ehotele ethengisa izinto ezingasokuze ulibaleke. Igumbi le-12, ipropathi enye ye-villa inokuqeshwa iyonke kusuku lwakho olukhulu. Ihotele izichaza njengophuma ngaphandle 'kwezothando kunye nokomoya obunzulu beYucatan,' ukuze ukwazi ukunxibelelana nawe, ubudlelwane bakho kunye nendawo ekungqongileyo apha. Umnyhadala wakho okhethekileyo ufuna ukurenta ngobusuku obuthathu kunye nomcwangcisi womtshato. Indawo egqibeleleyo enemifanekiso ine- $ 5,000 yokutya kunye nesiselo esincinci kunye nomthamo ophakamileyo wama-50 wenkonzo yokwamkela ngokupheleleyo. Yonke imirhumo ibandakanya usuku lokwamkela iindwendwe kunye nabasebenzi bendlu; ukusetyenziswa okukodwa kwendlu, izinto zendlu, igumbi lokuhlala kunye nolwandle; kunye namanzi okusela ongezelelweyo eendwendwe.
IVilla La Joya eRiviera Maya, eMexico
imisebenzi yabantu abatshatileyo ekhaya
Ukuba ufuna ukutshata eMexico kodwa awufuni ukuya kwindlela yokubhengeza, iRiviera Maya IVilla La Joya isenokuba yile nto uyikhangelayo. Indawo yokuhlala yabucala yolwandle ikuvumela ukuba utshintshe izifungo ngokuzimela entlabathini okanye egadini. Yisiqingatha seyure ukusuka eCancun, enendawo yokufikelela kwiindwendwe zomtshato ezingama-200, ke abahlobo bakho kunye nosapho baya kuba neendlela ezininzi zokulala ezikufutshane. Ukongezwa okonwabisayo eVilla La Joya kukubonelela ngeeNtente zeSky Sky. Indawo inezinto ezininzi ezenziwe ngokwesiko- kwaye icacile! -Intente onokuziqeshisa ukogquma ingca, iphuli kunye nepatio ukuqinisekisa ukuba yonke into iyahamba ngaphandle kwengxaki njengoko ufika.
Ukugqwesa uPlaya Mujeres eCancun, eMexico
Xa ucinga ukubalekela kwiparadesi, inokubonakala ngathi injengokuseta Ukugqwesa uPlaya Mujeres . Ngabantu abadala-kuphela konke okubandakanyiweyo okugcwele zonke izinto ezibandakanyayo: amachibi okudada, iisuti, iindlela zokutyela ezikhethiweyo. Kumtshato wakho oGqwesileyo, uya kukhetha iphakheji yomtshato kwaye emva koko unikwe ingcali yomtshato ukuze uzise umcimbi wakho ebomini. Ukhetho lwakho lomthendeleko luselunxwemeni okanye phantsi kwe-gazebo entle yamatye, kwaye ulwamkelo lunokwenzeka elunxwemeni, kwigumbi lokudlala ibhola, kwiSpice Terrace okanye kwiZiko leNgqungquthela iTerrace. Iiphakheji zomtshato ezinamacala aqala ngePakeji yoMtshato eGqwesileyo, zandisela ukuGqwesa kwePakethe yoMtshato woThando, kwaye zigqibe ngePhakheji yokuGqwesa yeGolide yokuGqwesa.
IWaldorf Astoria Los Cabos Pedregal eCabo San Lucas, eMexico
IWaldorf Astoria Los Cabos Pedregal Ilinganiswe iinkwenkwezi ezintlanu yiForbes iminyaka emihlanu ilandelelana. Akusiyo imfihlo iWaldorf Astoria konke malunga nokunethezeka, kwaye loo ndawo yokunethezeka idibene nemeko eyoyikekayo yeCabo San Lucas yenza le ndawo yokulala ibe yindawo yomtshato wamaphupha. Ewe ungatshata elunxwemeni, ujikelezwe bubuhle bendalo, kodwa zikho nezinye iindawo ezintle kwisiza: indawo ephambili yokuLobby Terrace, ehonjiswe ngeplanga yokhuni; i-Pool Terrace, enedama elingenasiphelo elixubana nomva wolwandle; La Palapa, indawo evulekileyo enophahla lwengca kunye nendawo yokubasa umlilo; Beach Club, indawo ngaphakathi-ngaphandle kunye vistas yolwandle, chandeliers kunye zezibane ezijingayo; Indawo yokutyela kaDon Manuel, indawo eyiyo yaseMexico eyi-hacienda; kunye ne-El Farallon, indawo enamawa ngaphezulu kwePasifiki.
isipho seminyaka eli-10
ingcebiso yomtshato ehlekisayo kubantu abasandul 'ukutshata
yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yokuphelisa amabala
amakhonkco omtshato alungileyo emadodeni
unxibe iimpahla ezifanelekileyo zemitshato